हल्लाको पछि नदौडौँ – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७७ साउन २७ गते ६:१८ मा प्रकाशित
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गत शनिबार उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संगठन कन्फडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा गौतम बुद्धका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा निकै ठूलो विवाद भयो । भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले गौतमबुद्ध आफ्नो देशका नागरिक भएको दावी गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मिडियामा समाचार प्रवाह भए । यो समाचारले तुरुन्तै सनसनी मच्चायो । तत्काल नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘यो एउटा स्थापित र निर्विवाद तथ्य हो, ऐतिहासिक र पुरातात्विक प्रमाणहरूका आधारमा गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका हुन् । उक्त क्षेत्र बुद्ध र बौद्ध धर्मको स्थल तथा युनेस्कोको विश्वसम्पदास्थलहरू मध्ये एक हो ।’ क्रिया एकातिर प्रतिक्रिया अर्कैतिर जस्तो देखियो । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको भनाइ बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने थिएन । उनको भनाइ थियो, ‘हामी सबैले आजसम्मकै महान् भारतीय भनेर चिन्ने दुई जनालाई हो । पहिलो गौतम बुद्ध र दोस्रो महात्मा गान्धी । र, हामीले मात्र होइन यी दुईलाई यसरी चिन्ने पूरै विश्वले नै महान् भारतीयका रूपमा चिन्छ ।’ यर्थाथमा भन्नुपर्दा भारतीय विदेशमन्त्रीको यो दावी पूरै असत्य होइन । गौतम बुद्धबारे नेपालले आवश्यक प्रचारप्रसार गर्न नसकेको र भारतले बढी नै अफवाह फैलाएका कारण विश्वका धेरै देशका नागरिकमा बुद्ध भारतीय नै हुन् कि भन्ने भ्रम छ ।
हामी नेपालीमा एउटा कमजोरी छ, बास्तविकता बुझ्नतिर लाग्नुभन्दा तत्काल प्रतिक्रिया दिएर विरोधमा उत्रिहाल्ने । यसले बेलाबेला ठूलोनोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । उदाहरणका लागि हृतिक रोशन प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । त्यतिबेला हाम्रो ठूलो कमजोरी भयो । यही कमजोरीका कारण पहाडी समुदाय र मदेसी समुदायबीचको सहिष्णुतामा ठूलो दरार पैदा भयो । त्यो दरारले हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भयो । सर्वसाधारण जनताले त होस् पुर्याएनन् पुर्याएनन्, सरकारमा रहनेहरूले पनि होस् पुर्याउन नसक्ने हो भने हामी आफैँलाई नोक्सान पुग्नेछ । बेलाबेलामा जे जस्ता अभिव्यक्ति दिनेगरे पनि भारतले आधिकारिक रूपमा भने गौतमबुद्ध आफ्नो देशमा जन्मेका भन्न सकेको छैन । बेलाबेलामा आउने गरेका अभिव्यक्तिलाई पनि भारतले नै खण्डन गर्ने गरेको छ । तर, बुद्ध नेपालमा जन्मे पनि अधिकांश समय भारतमै बसेको र भारतमै ज्ञान प्राप्त गरेको भन्ने प्रचारप्रसार भने तीव्र छ । जसलाई खण्डन गर्न नेपाल चुकेको छ ।
कपिलबस्तुका राजकुमार सिद्धार्थ गौतमका रूपमा नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका उनी भारतमा गएर बुद्धत्व प्राप्त गरी गौतम बुद्ध कहलाएको कुरा अर्धसत्य भए पनि लगभग स्थापित भइसकेको छ । यसलाई नेपालले पनि स्वीकारेको हो कि भन्ने देखिएको छ । गौतम बुद्ध संबन्धी अन्योलको जड भनेकै यही हो । दरबारको सुखसयल छाडेर भारतको बोधगया नपुग्दासम्म उनी साधारण राजकुमार मात्रै थिए त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिमागमा राख्नु जरुरी छ । उनी जन्मनासाथ जुरुक्क उठेर सात पाइला हि“डेको बुद्ध धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ । साधारण मानिस जन्मने बित्तिकै हि“ड्न सक्छ ? राजकुमारको रूपमा कपिलवस्तु दरबारमा रह“दा नै सिद्धार्थ गौतमले सामान्य मानिसमा नहुने गुण देखाइसकेका थिए । वास्तवमा सामान्य मान्छेका लागि राजकुमार या राजा भनेको निकै ठूलो कुरा हो । जीवनमा त्यहा“भन्दा उचाइमा पुग्ने ठाउ“ हु“दैन । तर, यो उचाइमा पुगेका सिद्धार्थ गौतम किन भिक्षु बन्न तयार भए ? बुद्धत्व प्राप्त नभई यस्तो संभव छ ? त्यसैले सिद्धार्थ गौतमले जन्मदै र हुर्कंदै बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए, बोधगयामा गएर त आफूलाई परिस्कृत गरेका हुन् । बुद्ध नेपालकै लुम्बिनीमा जन्मेका हुन् भन्ने अकाट्य प्रमाण हु“दाहु“दै पनि भारतले नक्कली लुम्बिनी खडा गरेको छ । यस्ता अकाट्य प्रमाणलाई पनि ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिएका कारण पनि भारतप्रति नेपाली मन सशंकित हुने गरेको हो ।